रङ नम्बरले जोडेको सम्बन्ध | SouryaOnline
रङ नम्बरले जोडेको सम्बन्ध
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १ गते २:५१ मा प्रकाशित
तीन वर्षअगाडिको कुरा । रातको साढे ११ बजेतिर मेरो मोबाइल बज्यो । नम्बर अपिरिचित थियो, उठाइन । फेरि केही इम्पोर्टेन्ट हो कि भनेर आफैले कल ब्याक गरे । उताबाट सुरुमै गाली पो बर्सियो, तर मीठो स्वरमा– ‘केहो दाजु तपाईं रातभरि बाहिर बस्ने ? घर आउनुपर्दैन ? यहा घरमा भाउजू रिसाएर हैरान छ ।’ म त अलमल्लै परे । आफूले भने बिहे नै गरेको छैन, उताबाट चाहि ‘भाउजू रिसाएर हैरान’ भन्ने आवाज सुन्छु । प्रश्न गरे– तपाईंले कसलाई फोन गर्नुभएको ? उनले नम्बर मिस्टेक डायल गरिछन् । ‘सरी’ भनिन् । तैपनि हामीबीच केहीबेर गफ चल्यो । त्यसपछि पनि फोन हुन थाल्यो । सुरुमा उनले नाम एलिसा कार्की भनेर एक–डेढ महिनासम्म ढाटिछन् । वास्तविक नाम कृति कार्की रहेछ, पछि मात्र थाहा भयो । त्यति बेला म २९ वर्षको थिए, उनी २१ वर्षकी ।
फोनमा कुराकानी भए पनि दुई महिनासम्म हामीले भेट गरेका थिएनौ । मलाई उत्सकुता थियो– यति मीठो स्वर भएकी मान्छे देख्दाचाहि कस्ती होलिन् त ? भेट्ने फोर्स गरे । घन्टाघरअगाडि भेट भयो । भेट्न त भेटियो, अलमल्लमा पो परियो– अब कता घुम्न जानु, के कुरा गर्नु । उनी मेरो बाइकमा बसिन् । बागबजार हुदै पुतलीसडकबाट फेरि घन्टाघरै पुग्यौ“ । केही कुरै गर्न सकिएन । फोनमा त म निकै ठूलाठूला कुरा गर्थें । मायाप्रेमका कुरासगै आवेशमा आएर कहिलेकाही भन्न नहुने कुरा पनि पो भनियो कि † तर, अहिले चाहि म छिरिक्कै केही बोल्नै सकिरहेको थिइन ।
तेस्रोचोटि घुम्न जाने प्रस्तावचाहि उनैले गरिन् । हामी ककनीतिर लाग्यौ“ । बाइक बिग्रिएर बाटैबाट फर्किन पर्ने भयो । बाइकमा बस्दा उनी मलाई छुन पनि डराउ“थिन् । म पनि के कम, एक्सिलेटर दबाएर बाइकको गति तलमाथि पारिरहन्थे“ । लाग्थ्यो– उनी मेरो झनै नजिक बसून् । लडिन्छ भनेर पा“चचोटिसम्म ‘कम्मरमा अ“ठ्याऊ’ भने तर माने पो †
घुमघाम, कुराकानी र भेटघाट धेरै भयो । चिनजान भएको ५–६ महिनापछि ‘घरमा एउटा केटा मलाई माग्न आएछ, के गरू’ भनेर सोधिन् । यसै गर भनेर दाबी गर्न सकिन । उनले विवाह गरिनन् । तर हामीलाई थाहा भयो कि हामीबीच गतिलै माया बसिसकेछ । हामीले विवाह गर्ने सोच बनाएर परिवारमा कुरा राख्यौ । जातको विषयलाई लिएर दुवै परिवारमा रडाको मच्चियो । पहिला उनको परिवारले मानेन, अहिले मेरो परिवारले मानिरहेको छैन । दुई परिवारले त हामीबारे अहिलेसम्म पनि सम्झौता गर्न सकेका छैनन् तर हाम्रो प्रेमसम्बन्ध झन्झन् गहिरिदै छ । मेरो पछिल्लो चलचित्र मनले मनलाई छुन्छ रिलिज गरेपछि बिहेबारे सोच्नुपर्ला ।
सजीव प्राणीमा ‘सेक्स’ साधारण हो । सेक्सलाई ‘लभ’ का दृष्टिले चित्रण गरे एउटा अर्थ लाग्छ, बासनाका दृष्टिले हेरे अर्कै देखिन्छ । सेक्स गरिसकेपछि त्यो युज टु हुन सक्छ । युज टु कुराहरू बिस्तारै दिक्क लाग्न थाल्छन् । समयअगावै कुनै कुरा पाउने अपेक्षा गर्नु हुदैन, पाए नै पनि त्यो उपयुक्त समयमा पाएजत्तिकै महत्वपूर्ण ठहरिदैन । यही कारणले आज तीन वर्षसम्म पनि हाम्रो माया निरन्तर बगिरहेछ । हामीबीच सेक्स भएको भए युज टु हुन्थ्यो र प्रेमसम्बन्ध अगाडि बढ्दैनथ्यो होला । मनले मनलाई छुन्छमा पनि मनलाई छुने गीत राखेको छु– छुदैमा चिनियो अरू केही बोल्नुपर्छ र, यो मायाभन्दा राम्रो अरू कोही हुन्छ र ? त्यसैले सेक्सलाई मिसयुज गर्नु हुदैन ।